Ingaba ndidinga a Bankruptcy Lamagqwetha - Zonke abaqondisi-mthetho kwi-Russia! Oyena lawyer portal.
Ingaba ndidinga a Bankruptcy Lamagqwetha
Umthetho imbaxa kwaye utshintsho rhoqo
Sino igqityiwe imimiselo nemiqathango yethu Rocket Lawyer Kwi Umnxeba Inkonzo Inqanaba kwesi Sivumelwano ukuba isicelo sakho ukusebenzisa iqonga neemveliso neenkonzo ezibonelelwe ngu-Rocket LawyerNceda funda Inkonzo Inqanaba Isivumelwano ngenyameko njengoko kubhaliwe governs ubudlelwane phakathi kwenu kwaye Rocket Lawyer kwaye yi-siqhubeke sebenzisa Rocket Lawyer, unoxanduva agreeing ukuba kubotshwa yi-igqityiwe imimiselo nemiqathango. Inkqubo ngu enobunzima nangona, ukuze uqinisekise ukuba usebenzisa filing kuba ilungelo unyaka ka-bankruptcy, kusenokufuneka a bankruptcy lamagqwetha ukuba isikhokelo kuwe nge amanyathelo. Nantsi into nibe silindele ukususela inkqubo: zimbini iintlobo ezahlukileyo bankruptcy attorneys: abarhwebayo bankruptcy attorneys abo baya kukunceda ifayile bankruptcy kuba kwishishini lakho, kwaye umthengi bankruptcy attorneys abo baya kukunceda ifayile ye-bankruptcy kuba ngokwakho okanye nge iqabane lakho. Abarhwebayo bankruptcy abaqondisi-mthetho ukukhusela kwishishini lakho ukusuka creditors xa ufaka kokudlula a bankruptcy filing. Baye kanjalo unako ukunceda wena cacisa-mboleko kunye isicelo ixesha restructure kwishishini lakho. Baya ziquka Isahluko kwaye Isahluko se- bankruptcy attorneys (ngakumbi iinkcukacha icandelo elilandelayo). Consumer bankruptcy abaqondisi-mthetho ukukhusela wena umlingane wakho xa kokudlula bankruptcy filing yi-nomngeni nge-creditors, clearing ityala, kwaye ekumiseleni intlawulo izicwangciso. Baya ziquka Isahluko kwaye Isahluko bankruptcy attorneys (ngakumbi iinkcukacha icandelo elilandelayo). Ukuba ishishini lakho yi struggling, ungafuna a Isahluko se- bankruptcy lawyer. Yakho lawyer unako ukufumana uncedo kuni ixesha restructure kwishishini lakho kwaye ququzelela kwakhona yakho amatyala ukuba kuhlawulwa kamva. Nangona kunjalo, ukuba uyazi ukuba kufuneka uvale kwishishini lakho, kusenokufuneka a Isahluko bankruptcy lawyer, abo baya essentially isandla sakho phezu kwishishini lakho ukuya kwi-creditor kubuyela kuba zicacisiwe ityala. Ukuba ngaba ubuqu ingaba filing bankruptcy, kananjalo usenokusebenzisa a Isahluko bankruptcy lamagqwetha ukuba awukwazi lihlawule ityala lakho ngokuhamba kwexesha. Uza kunikwa-mali inyama qala kwi-kubuyela kuba ezinye yakho personal impahla yexabiso. Ukuba uzama ukuba lihlawule ityala lakho kodwa kufuneka nje kufuneka ngakumbi ixesha, Isahluko bankruptcy lamagqwetha kungasinceda ququzelela kwakhona yakho amatyala kwaye bayathetha a intlawulo isicwangciso kunye creditors.
Abantu aren ukuba kufuneka ube a lawyer ukuba ifayile bankruptcy (amakhulu kwaye partnerships ingaba).
Enikwe enobunzima nemigaqo-nkqubo engqonge bankruptcy filings, nisolko mhlawumbi bhetele ngaphandle kunye bankruptcy lawyer ngubani onako ukukhusela amalungelo akho njengoko a debtor. Ngokuqhelekileyo bankruptcy attorneys uza kwentlawulo yi-ilixa, kwaye ndiya buza kuba retainer. A retainer yi imali ehlawulweyo ikhutshwe kwasekuqaleni nto leyo iza ke kubekwa kwiintlanganiso yintoni oyityala lawyer. Yakho yokutshintsha uza vary kuxhomekeke apho uhlala khona kwaye unyaka ka-bankruptcy usenza ifayile. Qiniseka ukuba buza phezulu phambili kangakanani yakho lawyer uza ngaphandle kwentlawulo. Abanye nee-arhente ibango ukuba ukucutha okanye yomeleza ityala, kodwa end phezulu costing kuwe kakhulu ngaphezu kwenu ekuqaleni owed kwi-sebenzisa ixesha elide.
A bankruptcy lawyer izakuzama okuzisa okanye ukucutha ityala ngaphandle alahle nani nkqu nangoko ndandinqwenela ukuba ndiye phambili kulo mngxuma.
Kuxhomekeke uhlobo bankruptcy kuwe ifayile, ityala lakho kukuhluma lowered, erased, okanye reorganized ngoko ke ukuba uhlawula xa nisolko nako. Creditors ingaba kungcono ukufumana i-lower isixa-mali imali kunokuba namnye, ngoko ke abo bazimisele isaphulelo isixa-mali oyityala kwabo. Ukuba ukhe ubene filing kuba consumer bankruptcy, nibe kuphulukana nayo ezinye impahla yexabiso kwaye ukuba ukhe ubene filing kuba abarhwebayo bankruptcy, nibe kuphulukana nayo kwishishini lakho. A bankruptcy lawyer iya kuba eyona suited ukuhlola imeko yakho kwaye recommend uhlobo bankruptcy kufuneka ifayile, ngokunjalo kuba lapho ukunceda wena ngokusebenzisa inkqubo. Eli nqaku iqulathe jikelele zomthetho ulwazi kwaye ayiqulathanga isemthethweni ingcebiso. Rocket Lawyer ingaba umthetho ifemi okanye substitute kuba umtshutshisi okanye umthetho ifemi. Kuba isemthethweni ingcebiso, 'Rocket Lawyer iwebhusayithi kukuba KUDE kube lula ukusebenzisa kunokuba nayiphi na enye 'uxwebhu library' mna anayithathela ngonaphakade efunyenweyo kwi-intanethi. Ke omnye phezulu zokusebenza mna recommend, ngenxa yokuba izinto ezibalaseleyo ngalo into abayenzayo. Mna highly recommend Rocket Lawyer kuba nabani na nge- kwi, yerente iimpawu get umrhumo ukuba iinkonzo zabo kwaye kuya ngaphandle kwenu phantsi ezindleleni.